Momba anay - ZHEJIANG LEMA ELECTRICS CO., LTD
Zhejiang Lema Electric Co., Ltd.dia miorina ao amin'ny tanànan'i Wenzhou, faritanin'i Zhejiang. Niorina tamin'ny 1986 ny orinasa.
Lema dia manolo-tena amin'ny R&D, famokarana ary fivarotana jiro elektrika fanaraha-maso indostrialy. Ny vokatra fototra ao amin'ny orinasa dia misy ny switch micro sy ny dia (fetra)Switch, switch button switch, switch ny tongotra, switch toggle, protector overload, AC power socket.
Taorian'ny fandrosoana maharitra efa ho 30 taona dia lasa mpamokatra matihanina lehibe switch of micro switch in China i Lema. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manarona faritra mihoatra ny 11000 metatra toradroa.
Mifantoha amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fanatsarana tsy tapaka ny vokatra fanaraha-maso kalitao avo lenta!
Ekeo ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana hanamboarana azy hamaly ny filan'ny fampiharana manokana!
Hatsarao ny fanatanterahana ny vidin'ny vokatra ary hitsitsy vola ho an'ny mpanjifa!
Miaraka amin'ny famokarana matihanina sy ny ekipa R&D, ny vokatra dia azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Mampivoatra ny teknolojia famokarana matihanina ary manadihady tsy miankina ary mampivelatra ny fitaovana famokarana.
Ny singa manisy tombo-kase sy ny tsindrona rehetra dia mivoatra sy novokarina, izay manome antoka ny kalitaon'ny vokatra sy ny tsingerin'ny famokarana.
Amin'ny alàlan'ny fanodinam-bokatra ny akora, ny fanodinana ny ampahany ary ny fanangonana vokatra vita, ampiharina ny fanaraha-maso kalitao marobe, ary ny fanaraha-maso ny vokatra dia fanaraha-maso feno 100% mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra natolotra.
Miaraka amin'ny laboratoara matihanina, ny fahombiazan'ny vokatra dia azo zahana mifanaraka amin'ny fepetra takiana mahazatra.
Ny vokatra fototra dia nahazo CCC, UL, VDE, CE ary fanamarinana hafa, ary mifanaraka amin'ny fenitra Rohs.
Toggle Switch, Kitendry Micro Push Micro Switch No Nc Miaraka, Potsero Button Footswitch, Switch switch amin'ny herinaratra, Toggle Switch Boot, Push Button Micro Switch,